Muxuu ka yiri Zidane wararka ku aadan in kooxaha Real Madrid iyo PSG ay isdhaafsanayaan xiddigaha Bale iyo Neymr Jr? – Gool FM
Muxuu ka yiri Zidane wararka ku aadan in kooxaha Real Madrid iyo PSG ay isdhaafsanayaan xiddigaha Bale iyo Neymr Jr?
(Spain) 23 Luulyo 2019. Macalinka kooxda kubadda caga ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa sheegay inuusan marna dooneynin inuu hoos u dhigo xushmada uu u hayo xiddiga reer Weles ee Gareth Bale, kaddib markii uu si cad u sheegay in la gaaray xiligii uu bixi lahaa xiddigan, kaddib kulankii saaxiibtinimo ay dhawaan la ciyaareen Bayern Munich.
Inta lagu gudi jiray shirka jaraa’id uu kaga hadlayay tababare Zidane kulanka saaxiibtinimo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Real Madrid iyo Arsenal caawa saqda dhexe ayaa wuxuu ku sheegay:
“Mararka qaar luqadeyda Spain ma cada, laakiin waxaan noqon doonaa mid aad u cad, uma muujinin ixtiraam daro qof walba, gaar ahaan haddii uu yahay ciyaaryahan, mar walba waxaan jiraa dhankooda, kooxda waxay ka shaqeyneysay bixitaanka Bale”.
“Gareth Bale ma uusan ciyaarin kulankii Bayern Munich, maxaa yeelay sidaas ayuu doonayay, waa ciyaaryahan Real Madrid ah, waxna isma bedelin, wuxuuna tababarka u sameyn doonaa maanta si dabiici ah, berrina waan arki doonaa waxa dhaca”.
“Ma muujinin inaan ku qanacsaneyn Gareth Bale, wuxuu ciyaari karaa kulanka Arsenal”.
Intaas kaddib Zinedine Zidane ayaa la weydiiyay suurtogalnimada ay kooxaha Real Madrid iyo PSG isku dhaafsan karaan xiddigaha Bale iyo Neymar Jr wuxuuna ku jawaabay:
“Waxba kama ogi waxa arrintaas ku saabsan, kama jawaabi karo”.
Unai Emery oo si weyn u amaanay xiddiga ay Arsenal qarka u saaran tahay inay lasoo wareegto ee Dani Ceballos